Isi ike nke ihe onwunwe na mineral 1. Diamond 2. Boron carbide 3. caradium carbide 4. Silicon carbide 5. titanium carbide 6. corundum 7. carbide tungsten 8. molybdenum carbide 9. chromium carbide 10. Emery 11 ....
Yiri Ụgha-Ịgba aka
A na -eji efere Wodon eyi akwa iji mee ọtụtụ akụkụ dị mgbagwoju anya ka edobe ya na ebe a na -eyi akwa. Anyị nwere ọtụtụ ngwa iji gbanwee efere anyị. site na injin ...
Yiri nkebi-Bolt agbakwunyere ịgbado ọkụ
A na -eji efere Wodon eyi akwa iji mee ọtụtụ akụkụ dị mgbagwoju anya ka edobe ya na ebe a na -eyi akwa. Anyị nwere ọtụtụ ngwa iji gbanwee efere anyị. site ...
Yiri Nmepụta Nkebi - Oghere mkpọpu ala
A na -eji akwa akụkụ Wodon na -eyi ọtụtụ akwa dị mgbagwoju anya ka edobe ya na ebe a na -eyi akwa. Anyị nwere ọtụtụ ngwa iji gbanwee efere anyị: igwe igwe ịkpụ plasma 12, igwe na -ehulata 12 na igwe ịpị, nwere ikike nhazi dị elu na -arụ ọrụ ...
Non -cracks eyi efere
Usoro WD-NC100: Mpekere ndị na-anọghị n'elu weld; Ngwa pụrụiche dị na China emebere ka ọ rụọ ọrụ dị ka eriri ụlọ, na efere slide na igwe igwe nchara. Nha mpempe akwụkwọ siri ike nke Chemicals Base Betal C - Cr HRC50-55 - Nchara Nchara
Mpempe mkpuchi carbide nke Chromium na -eyi efere MGBE IHE
Chromium carbide overlay wear plate CUT TO SIE Wodon nwere ike ịnye efere niile (Max: 2100*3500mm) ma yikwasị akụkụ akụkụ dị ka eserese gị. Emebere ihe dị n'elu bụ efere Wodon WD1200. Nke a bụ njirimara: * Chromium carbide karịrị ...
Kedu ihe kpatara efere anyị ji enwe nguzogide dị mma nke ukwuu?
Kedu ihe kpatara efere anyị ji enwe nguzogide dị mma nke ukwuu? 1. Ihe mejupụtara kemịkal machie bụ isi. Isi ihe mejupụtara efere Wodon bụ C (%): 3.0-5.0 na Cr (%): 25-40. Ọdịdị kemịkal a na -ebute irighiri ihe siri ike nke Cr7C3 chrome carbide. ...
Kedu ihe bụ Chromium Carbide Overlay Plate?
1) Kedu ihe bụ Chromium Carbide Overlay Plate? CCO na nkenke, ọ bụ efere a na -ewere dị ka nke kacha sie ike n'ahịa. O nwere ọtụtụ ihe dị iche iche na -enye nkwụsị dị elu ma ka mma: * Nchegbu * Abrasion * Mmetụta * Okpomọkụ & nb ...
Tianjin Wodon sonyere na ihe ngosi 25 nke Beijing Essen Welding & Cutting Fair na Shanghai City
Ihe ngosi 25 nke Beijing Essen Welding & Cutting Fair Beijing Essen Welding & Cutting Fair (BEW), nke China Mechanical Engineering Society (CMES) na-akwado, Welding Institution of CMES, China Welding Association (CWA), Kọmitii Ngwa Ngwa Welding nke CWA, Ger ...
TIANJIN WODON sonyere na ọgbakọ mkparịta ụka nke Africa
site na nchịkwa na 20-11-17
Tianjin Wodon, nke a maara dị ka onye nrụpụta ihe nke bimetal chromium carbide overlay welding wear plates na hardfacing cored welding wires, ga-aga Mining Africa site na 10th ruo 14th na Septemba. gburugburu ụwa na ha ...
TIANJIN WODON ga -esonye na AFRICA MINECTRING ELECTRA 2018.
Tianjin Wodon, nke a maara dị ka onye nrụpụta ihe nke bimetal chromium carbide overlay welding wear plates na hardfacing cored welding wires, bụ ịga ELECTRA MINING AFRICA 2018 site na 10th ruo 14th na Sep. Ngwaahịa dị na Ngosipụta: Submerge Arc ịgbanye efere CCO: 6+6 * 300*300mm 8+8*100*100 agbakwunyere ...
TIANJIN WODON YI NA -EGO EGO NA -ECHICHE., LTD, MARA DỊ KA TIANJIN WODON, GA -aga EXPONOR 2019 ECHERE NA CHILE.
Tianjin Wodon Wear Resistant Material Co., Ltd, nke a maara dị ka Tianjin Wodon, ga -aga Exponor 2019 nke emere na Chile. Nke a ga -abụ nke ugboro abụọ a ga -agba ụkwụ na Chile. Anyị na -na Chile ke 2016. Chile International Ngwuputa ngosi bụ ihe kasị mkpa na kasị ọkachamara Ngwuputa exh ...